Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Mareykanka » Inta badan dalxiisayaasha Hawaii waxay si buuxda uga tallaalaan COVID-19
Jebinta Wararka Mareykanka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • HITA • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Kamaainas • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA) waxay soo saartay natiijooyinka daraasaddeeda daba-galka gaarka ah ee ugu dambaysay, oo daraasad ku samaysay booqdayaasha ka socda dhul-weynaha Mareykanka ee booqday Hawaii intii u dhaxeysay May 15 illaa May 24, 2021, si ay u cabiraan khibrada ay u leeyihiin barnaamijka Hawaii ee Safarka Safarka iyo guud ahaan ku qanacsanaanta safarka.
Tani waa sahamintii seddexaad ee booqdayaasha ee taxane ah oo bilaabmay dhammaadkii sanadkii hore.
Ku dhowaad dhammaan (89 boqolkiiba) dadka soo booqday ee lagu wareystay daraasaddan ugu dambeysay waxay sheegeen in si buuxda loo tallaalay.
Soo-noqnoqdayaasha soo noqnoqda waxay u badan tahay in si buuxda loo tallaalo oo ay weheliyaan ardayda ka qalin jabisay kuleejka iyo kuwa dakhliga qoyskoodu ka sarreeyo $ 100,000.
Inta badan dadka soo booqday (boqolkiiba 76) waxay ku qiimeeyeen safarkooda inuu yahay "Wanaagsan," oo waxyar hoos uga dhacay bishii Maarso (82 boqolkiiba) iyo Diseembar / Janaayo (85 boqolkiiba). Arrinta ugu weyn (boqolkiiba 30) ee ay bixiyeen jawaab bixiyayaashu waxay kuxirantahay awooda xadidan ama helitaanka maqaayadaha iyo meelaha soojiidashada ah.
In kasta oo xayiraadaha bulshada COVID-19 ay sii jireen intii ay socdeen, 82 boqolkiiba dadka soo booqday waxay muujiyeen inay awoodaan inay qabtaan dhammaan ama inta badan howlaha ay qorsheeyeen.
Baadhitaankii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in booqdayaasha dakhliga qoyskoodu ka hooseeyo $ 100,000 ay aad ugu qanacsan yihiin safarkooda marka loo eego kuwa dakhliga qoyskoodu ka sarreeyo $ 100,000. Intaa waxaa sii dheer, kuwa booqday kaliya hal jasiirad ayaa ka qanacsanaa kuwa booqday jasiirado badan.
Markii la waydiiyay khibradooda, boqolkiiba 93 jawaabeyaashu waxay ku qiimeeyeen saaxiibtinimada shaqaalaha iyo dadka deegaanka inay yihiin "heer sare" ama "ka saraysa celcelis ahaan." Inta badan dadka soo booqda waxay sidoo kale ku qiimeeyeen hoteelkooda (ama meesha ay seexdaan) mid aad u fiican.
Inta lagu jiro Maajo 2021, Hawaii Safarro Ammaan ah barnaamijka ayaa loo oggol yahay inta badan rakaabka ka imanaya gobolka ka baxsan iyo u safrida goballada kala duwan si ay uga gudbaan qasabka 10-maalmood ee is-karantiilka ah oo leh natiijo aan fiicnayn oo ah tijaabada COVID-19 NAAT Saaxiibka Imtixaanka Aaminsan.
Ku Saabsan Safarrada Nabdoon, tirooyinku waxay ahaadeen kuwo isdaba-joog ah dhammaan saddexda sahan, iyadoo ku dhowaad dhammaan soo-booqdayaasha (98 boqolkiiba) ay ka warqabaan hab-maamuusyada tijaabada kahor ee Hawaii kahor intaysan ka bixin waddankooda. Boqolkiiba dadka soo booqday ee sheegay inay dhibaatooyin ku qabaan imaatinka imaatinkooda sidoo kale wax isbadal ah kuma imaan; si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa u muuqday inay caqabado ku qabaan websaydhka Safarada Safarka ee Hawaii (29 boqolkiiba bishii Juun iyo 17 boqolkiiba bishii Maarso iyo 9 boqolkiiba bishii Diseembar / Jan).
In ka badan kala bar (56 boqolkiiba) jawaabeyaasha ayaa sheegay in ay booqan doonaan Hawaii mar kale iyadoon loo eegin shuruudaha booqashada kahor, 23 boqolkiiba ayaa sheegay in ay soo booqan doonaan mar kale markii uu faafay cudurku, 11 boqolkiiba ayaa sheegay in ay booqan doonaan marka uusan jirin karantiil ama baaritaan loo baahan yahay , iyo 10 boqolkiiba ayaa sheegay inaysan qorsheyneynin inay ku noqdaan Hawaii.
Qeybta Cilmi baarista Dalxiiska ee HTA waxay qandaraas ku qaadatay cilmi baarista Anthology si ay u sameyso sahaminta khadka tooska ah inta udhaxeysa Juun 2 iyo Juun 8, 2021, iyada oo qeyb ka ah qandaraaska Qanacsanaanta Booqdayaasha iyo Daraasada Waxqabadka. Natiijooyinka Bisha Juun 2021 Booqdaha COVID-19 Study ayaa la soo bandhigay intii lagu jiray shirkii Golaha Agaasimayaasha ee HTA 24-kii Juun.